कथा : साइबरमा कमरेड - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कथा : कमरेड
कविता : हिटलरको दुर्भाग्य →
“मलाई कमरेड नभन्नुहोस् ।”- म उनीसँग झनक्क रिसाएको थिएं । “कमरेड भन्दा डर लाग्छ ?”- उनको सहज प्रश्न थियो ।
बास्तवमा मलाई ‘कमरेड’ शब्द देख्ाि नै डर लाग्थ्यो । संकटकाल थियो । गाउामा माओवादीको जगजगी । शहरमा सरकारी सुरक्षा फौजको त्रास । गाउाका समाचार धेरै बिक्थे त्यसताका । गाउाको समाचार लेख्ो बापत कोहीकोही बेला शहरमा बस्ने हाकिमहरुलाई प्ा्रष्टिकरण समेत दिनु पर्दथ्यो । यो बीचको सन्तुलनमा कमरेड थपिंदा एकको पक्ष लिजस्तो हुन्थ्यो । फेरी अर्को पक्षले थाहा पाएमा पर्ने जोख्ािमको डर त छदैं थियो । त्यसैले मलाई कसैले कमरेड नभनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । एक उनी थिइन्, जो घरिघरि मलाई ‘कमरेड’ सम्बोधन गरेर जिस्क्याइ रहन्थिन् ।
उनलाई पहिलो पटक मैले एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा देख्ोको थिएं । माओवादी कलाकारको ‘स्टोरी’ बिक्ने आाकेर मैले उनको अन्तरवार्ता समेत लिएको थिएं । ‘हातमा के भएको ?’ – उनको दाहिने हातमा बााधेको रुमाल र असन्तुलित हात झुञ्ड्याइले मलाई प्रश्न गर्न प्रेरित गर्‍यो । ‘ गोली लागेको ।’ – ‘अरे Û बाफ रे बाफ’ गोली लागेको अवस्थाको कति सहज उत्तर । न अनुहारमा कुनै परिवर्तन, न बोलीमा । मानौं, गोली लाग्नु भनेको कमिलाले टोक्नु भन्दा सामान्य हो ।
‘हेरौ’ मैले आग्रह गरें । उनले रुमाल हटाइन् । पाख्ाुराको माथि केही ख्ााल्डो परेको छ ।, त्यहाा केही रुवा कोचिएको छ । घाउको परिधि सुन्निएर रातो भएको छ । ‘ओ हो Û’ – मेरो मुख्ाबाट अनायस यो शब्द फुत्कियो । ‘युद्धमा यो सामान्य हो ।’ उनले सामान्य रुपमा लिइन् ।
मलाई उनको नामले थप आश्चर्यमा पारेको थियो । बााके-बर्दियामा अनौठा अनौठा नाम गरेका माओवादीहरुकोे चर्चा हुन्थ्यो । माओवादीका केन्दीय नेता ‘प्रचण्ड’ थिए । तर, यिनको नाम कविता थियो । ‘युद्ध र कविताको के सम्बन्ध ?’ – मेरो चाहना उनको नाम अलि आक्रमक, क्रुर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो । तर, मेरो प्रश्न र्झन नपाउादै उनले भनेकी थिइन् – ‘शोषण, दमन र बिभेदबाट बिद्रोह जन्मिन्छ । बिद्रोहको संख्ाघोष बन्दुक र कविता दुबैले गर्दछन् । त्यसैले युद्ध र कविता एक अर्काका परिपूरक हुन् ।’ ‘क्रान्तिकारीका कुरै ठूला ।’ – मनमनैको मेरो यो निश्कर्षसागै त्यो दिनको अन्तरवार्ता टुंगिएको थियो ।
नेपाली जनयुद्धको पहिलो पंक्तिको साक्षी पत्रकारहरु थिए । त्यसैले पनि म युद्धका हरेक आरोह अवरोहहरुसाग नजिक थिएं । अनेक मान्छे भेटिन्थे, अनेक घटना अचम्मका हुन्थे र धेरै समय चर्चामा रहिरहन्थे ।
मलाई कविता कमरेड देख्ोर छक्क लागेको थियो । ‘म किन जनयुद्धमा लागिंन ?’ भन्ने प्रश्न एकपटक मेरो मनमा आएको थियो । समाज परिवर्तनका लागि जनयुद्ध ठीक हो भन्ने निष्र्कषमा म पुग्न ख्ाोज्दै रोकिंदै गर्दथें । कविता समाज परिवर्तनका लागि लडिरहेको बताउाथिन् । परिवारका सदस्यहरु युद्धको नाममा मारिएपछि त्यसको बदला लिन उनी यता होमिएकी थिइन् । उनले बाबुआमा सागै आफन्त गुमाइन्, स्कूले शिक्षा गुमाइन्, सामाजिक सुरक्षा गुमाइन् । पाइन् केवल पहाड झै लाग्ने पीडा र उज्यालो र लक्ष्यविहीन भविश्य । यसरी युद्ध बन्यो एक किशोरीको सुरक्षित गन्तब्य । कविताले बन्दुक उठाइन्, युद्ध लडिन् । मान्छे मारिन् । लडाईकै क्रममा उनको हातमा समेत गोली लाग्यो । दाहिने हातमा गोली लागेपछि उनी सांस्कृतिक बिभागमा आइन्, गीत गाइन् र बिद्रोह र परिवर्तनको संख्ाघोष गरिरहिन् ।
पााच बर्ष पछि म यो घटना सम्झदैंछु । जीवनको अनेक मोडमा मसाग भेट भएका पात्रहरु कहाा छन्, के गर्दैछन् मलाई थाहा छैन । तर कविता कमरेडलाई पााच बर्ष पछि नेपालगञ्जमा भेटें । म उनलाई भेटेपछि धेरै अन्योल र असमान्जस्यमा परें र निष्कर्ष निकालें – ‘युद्धले कहिल्यै कसैलाई फाइदा गर्दैन । ‘
म नेट साइबरमा थिएं । साइबरको काउण्टरमा कोही महिला अमेरीका जानका लागि भरिने डिभी चिट्ठाको सूचना साइबरको मान्छेलाई दिइरहेको म क्याविनबाट थाहा पाइरहेको थिएं । त्यो आवाज चिने जस्तो लाग्थ्यो । मैले को रहेछ भनि हेरें तर चिनिंन । काम सकेर म निस्किंदा ती महिला त्यही बसिरहेकी थिइन् ।
फुङ्ग उडेको अनुहार, धेरै दिन देख्ाि स्याम्पू नदेख्ोजस्तो लाग्ने कपाल, मैलो देख्ािने कुर्ता सुरुवाल र हात्तिछाप चप्पल लगाएकी ती महिलालाई मैले कंहि देख्ोजस्तो, कहिं चिनेजस्तो लागिरह्यो । ‘कति पैसा भयो ?’ – ती महिलाको समेत ध्यान आकृष्ठ गर्दै म काउण्टरमा गएं । उनका निरस आाख्ााले म तिर पुलुक्क हेरे । मेरो मुख्ाबाट आश्चर्य मिश्रति आवाज आयो – ‘कविता कमरेड Û’ सायद उनले पनि मलाई चिनिन् । म त कविता सभासद भइन्, मन्त्री वा कतैको ठूलै पदमा पुगिन् होला भन्ने पो सोचिरहेको थिएं ।
सन्सार जितौंला जस्तो इच्छाशक्ति बोकेर युद्धमा लागेकी कविता र अमेरीका जान पाइने आशामा साइबरमा डिभी भर्न लागेकी कविताको म तुलना गर्दैछु । ‘अब्बल साम्यवादी चेत भएकी, अनुहारमा दिव्य आलोक भएकी कविता र नीरह र निरस कविता के दुबै एकै हुन् ?’ मेरो मन प्रश्न गर्छ । ‘समयको गति सागै कविता कमरेड किन आफूले संघर्ष गरेको देश नेपाल छाडेर सपनाको देश अमेरीका प्रति आशक्त बनिन् ?’- मसाग अनगिन्ती प्रश्नहरु एकै पटक ज्वारभाटा जस्तै आउादै जादैं छन् ।
उनले भनिन् – ‘मलाई कमरेड नभन्नुहोस् । आजभोलि यो शब्दसाग मलाई बितृष्णा छ ।’
हामीले केहीबेर कुरा गर्‍यौं । उनको दाहिने हातको घाउ अझै ठिक भएको छैन । यसले हातलाई अझै गलाई रहेको छ, पीप बगिरहन्छ । उनको बिहे भएको, फेरी पतिको युद्धकै क्रममा मृत्यु भएको, शान्ति स्थापना पछि पार्टीमा उनको भूमिका कम भएको, सांस्कृतिक बिचलनको आरोपमा पार्टीले कारवाही गरेको र अन्त्यमा शहरतिर ‘पाइएको’ काम गरेर जीवन गुजारा गरिरहेको सुन्दा मलाई नमज्जा भयो । म त्यहााबाट निस्किएं । कविता कमरेड साग फेरी भेट होला, नहोला । तर, मसाग यो प्रश्न अझै साथै छ – ‘के कविता कमरेडलाई डिभी पर्ला ?’
डिसेम्बर 31, 2009
This entry was posted in नेपाली कथा and tagged Bhoomi Bhandari, nepali sahitya, sangrahalaya, कथा, नेपाली कथा. Bookmark the permalink.
नेपाली गीत (893)
नेपाली काव्य (7,337)
नेपाली गद्य (3,822)
नेपाली कथा (2,569)
बाल साहित्य (276)
बाल कथा (156)
गजल : संसारमा बसेको छु
लघुकथा : संयोग
कविता : म मेरै मृत्यु मर्न चाहन्छु
कविता : असमयमै अस्ताएकाे घाम
कविता : गणतन्त्र स्तम्भको बलेसीबाट
कविता : हृवाँ नेपालमा
कविता : सजाइरहने छौं सपना
कविता : पर्खालहरु
कविता : समालोचक
छोक : शहर
सूत्रकथा : यौवन
लघुकथा : यन्त्रमानब
भण्डार कोठा Select Month November 2017 (291) October 2017 (318) September 2017 (326) August 2017 (348) July 2017 (447) June 2017 (355) May 2017 (380) April 2017 (254) March 2017 (303) February 2017 (260) January 2017 (499) December 2016 (535) November 2016 (381) October 2016 (351) September 2016 (354) August 2016 (269) July 2016 (245) June 2016 (154) May 2016 (166) April 2016 (238) March 2016 (551) February 2016 (539) January 2016 (574) December 2015 (697) November 2015 (464) October 2015 (245) September 2015 (220) August 2015 (215) July 2015 (320) June 2015 (125) May 2015 (118) April 2015 (181) March 2015 (224) February 2015 (122) January 2015 (113) December 2014 (138) November 2014 (109) October 2014 (107) September 2014 (114) August 2014 (216) July 2014 (125) June 2014 (119) May 2014 (152) April 2014 (213) March 2014 (96) February 2014 (202) January 2014 (147) December 2013 (123) November 2013 (118) October 2013 (112) September 2013 (283) August 2013 (530)